မိုးစပါးစိုက်ဧကတစ်သိန်းကျော် Contract Farming စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီး
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုမြှင့်တင်နိုင်ရန် Financial Literacy Festival အစီအစဉ် စတင်မည်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဟာရီကိန်းဆာလီ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်၊ လျှပ်စစ်မီးများပြတ်တောက်
ဘီလာရပ်စ်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများ စီစဉ်သူအမျိုးသမီး လုံခြုံရေးဥပဒေဖြင့် တရားစွဲခံရ
ချမ်းသာသောနိုင်ငံများက ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အမြောက်အမြား ကြိုတင်ဝယ်ယူထား
အမေရိကန်က ထိုင်ဝမ်သို့ စစ်လက်နက်တိုးမြှင့်ရောင်းချရန် စီစဉ်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု မူဘောင်နှင့်ပတ်သက်၍ လူထုသဘောထားရယူ
ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများသာထားရှိမည့် ဒုတိယမြောက်ဆေးရုံကို မန္တလေးမြို့တွင် ထပ်မံဖွင့်လှစ်
နေပြည်တော်ရှိ အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ပထမအကြိမ် မဲနှိုက်ရွေးချယ်မှု စတင်
မြန်မာ-တရုတ် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအခက်အခဲများ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟုဆို
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁
မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုတွင် တွေ့ကြုံနေရသည့်အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်မှ ဒုတိယမြို့တော်ဝန် H.E. Mr. Dong Hua က ပြောကြားသည်။
ယူနန်ပြည်နယ်မှ ဒုတိယမြို့တော်ဝန် H.E. Mr. Dong Hua ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နိုဝင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပတ်က ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်သို့လာရောက်၍ အသင်းချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံအကြား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတိုးမြှင့်ရေးတို့အတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ယခုလာရောက်သည့် ခရီးစဉ်သည် နှစ်နိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်နိုင်ရေးတို့တွင် ပိုမိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှုတွင်တွေ့ကြုံနေရသည့် အခက်အခဲများကိုလည်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယူနန်ပြည်နယ်မှ ဒုတိယမြို့တော်ဝန် H.E. Mr. Dong Hua က ပြောကြားသည်။
မြန်မာကုန်သည်များ၏ ပို့ကုန်များကို နယ်စပ်မှတစ်ဆင့်တင်ပို့ရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မူဝါဒကန့်သတ်မှုအချို့ကြောင့် အခက်အခဲများရှိနေပြီး ယင်းအခက်အခဲများကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးစေလိုကြောင်းနှင့် သို့မှသာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုသည် ယခုထက်ပို၍ အဆင်ပြေ ချောမွေ့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဝင်းက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကို ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဝင်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဟန်နှင့် အမှုဆောင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။